ए मेरो हजुर ३ प्रिमियरमा कलाकार माझ मै देखियो अनमोलको यस्तो क्रेज। को को आए त फिल्म हेर्न ?(भिडियो) - Enepalese.com
ए मेरो हजुर ३ प्रिमियरमा कलाकार माझ मै देखियो अनमोलको यस्तो क्रेज। को को आए त फिल्म हेर्न ?(भिडियो)
इनेप्लिज २०७५ चैत २८ गते २२:०३ मा प्रकाशित
कलाकार तथा नायिका झरना थापाले निर्देशन गरेको फिल्म ए मेरो हजुर ३ को आज ग्रायण्ड प्रिमियर गरिएको छ । प्रिमियरमा नायक अनमोल केसी प्रति कलाकारहरुनै फ्यान भएको देखिएको छ । प्राय सबै कलाकारहरु उपस्थीत उक्त प्रिमियरमा अनमोलले सबैलाई धन्यवाद पनि दिए । एकदम टाइट सुरक्षाका विच फिल्मको प्रिमियर भैरहेको थियो । भिडियोमा हेर्नुसको को कलाकारले के भने र अनमोलको आगमनले कस्तो भयो । (भिडियो)